Maitiro ekumisikidza Kudonhedza kweMail mune asiri maICloud maakaunzi | Ndinobva mac
Maitiro ekumisikidza Kudonhedza kweMail mune asiri maICloud maakaunzi
Izvo zviri kuwedzera uye zvakajairika kutumira zvinongedzo mumaemail edu. Nekudaro, panogara paine miganho pahuremu hwemafaira atinonamatira. Ichokwadi kuti mumakore achangopfuura uyu muganho wave uchiwedzera. Nekudaro, muApple maakaunti zvinokwanisika kushandisa Mail Kudonhedza, gore rekuchengetedza system yekubatanidza mafaera mahombe. Nekudaro, nekutadza, iko kushandiswa kunongobatanidzwa chete kushandisa neApple maakaundi - account @ me.com; @ icloud.com, nezvimwe-. Asi iwe unofanirwawo kuziva izvozvo Iyi sevhisi inogona kushandiswa nemamwe asiri emaApple maemail masevhisi. Uye isu tichaenda kukuratidza maitiro ekuishandisa.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti izvi zvinoshanda sekureba seyako email maneja, iyo yaunogara uchishandisa kutumira nekutumira maemail, iImes yeMac.Kana iwe uchinge wajekesa izvi uye wamisa isiri-Apple account, iwe inogona kuenderera neiyi marongero. Saka, vhura "Tsamba" ye macOS uye enda kumenu bar. Dzvanya pa "Tsamba" uye wozviita zvakare pa "Zvaunofarira".
Iwindo idzva richaonekwa ipapo. Uye mairi uchave nematabhu akasiyana aunosarudza kubva. Iyo inotinakidza ndiyo inoratidza "Maakaundi". Iwe uchaona kuti kune akati wandei maakaundi ane chekuita neMail ye macOS mukoramu yekuruboshwe yewindo. Sarudza isiri-Apple sevhisi uye iwe uchaona kuti pazasi pekoramu yekurudyi pane sarudzo inoratidza: «Tumira zvakabatanidzwa zvakakura neDonhwe reMail». Tarisa bhokisi.
Kana iwe uri mumwe weavo vane maakaundi emaemail akasiyana uye unovashandisa mazuva ese, edza kuita iyi sarudzo kushande mune ese avo. Rangarira nenzira imwechete, izvo vashandisi vanogamuchira iyo email vanozove nemazuva makumi matatu ekudzivirira izvo zvinyorwa yakaitirwa mugore. Mushure menguva ino, izvo zvinhu zvichabviswa kubva kuseva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekumisikidza Kudonhedza kweMail mune asiri maICloud maakaunzi
Nyowani RSS application, Cappuccino News Reader